से ,क्स लागि उचित समय राति कि बिहान ? कारणसहित ! – Jagaran Nepal
से ,क्स लागि उचित समय राति कि बिहान ? कारणसहित !
आफ्नो पार्टनरसँग यो८न स८म्पर्क गर्न उचित समय कुन हो ? रातिको समयमा स८म्पर्क गर्द उचित हुन्छ वा विहानको समयमा ? एक अध्ययनले अहिले रातिको समयभन्दा विहानको समयमा उचित हुने देखाएको छ । विहानीको समयमा यो८न स८म्पर्क गर्नाले मुटु स्वास्थ्य राम्रो हुनुका साथै शरीरको प्रतिरोधात्मक शक्ति पनि बढाउँछ ।
आयुर्वेदका अनुसार से८क्सको राम्रो आनन्द तबमात्र आउँछ जब दुबै पार्टनर पूर्ण रुपले रिल्याक्स हुन्छन् । उसो त सामान्यतया हेर्ने हो भने से८क्सका लागि मानिसले रातिको समयलाई चुन्ने गर्छन् । तर, मर्निंग से८क्सको फाइदाबारे जानेर तपाईंपनि बिहानको समय नै से८क्स गर्न रुचाउनुहुन्छ होला ।
थकान पश्चात राति सुत्ने
दिनभरीको थकान र कामको तनाबले राति चाँडै सुत्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । दिउँसोभरीको कामको चापले पनि राति यो ८’न स८म्पकको बारेमा सोच्नु समस्या नै हुन्छ । त्यसैले रातिको समय निद्रा पुरा गरेर बिहान फ्रेश मूडमा तपाईं एक सेशन ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ । अध्ययनका अनुसार राम्रो निद्रा लिबिडोका लागि निकै आवश्यक हुन्छ ।
पार्टनरसँग बढ्छ निकटता
युनिर्भसिटि अफ टेक्सासले गरेको एक अध्ययन अनुसार से८क्सको क्रममा अक्सिटसिन हा८र्मोन निस्कन्छ । अक्सिटसिन पार्टनरसँग तपाईंको निकटता बढाउने काम पनि गर्छ । यस अवस्थामा तपाईंले पुरै दिन आफ्नो पार्टनरसँग कनेक्ट भएको महसुस गर्न सक्नुहुन्छ ।
बिहान पुरुष हुन्छन् बढि उ८त्तेजित
पुरुष रातभर आरामपछि बिहान बढि उ८त्ते८जित हुने गर्छन् । बिहानको समय उनको टेस्टोस्टेरोनको मात्रा उच्च हुन्छ । यस्तोमा मर्निंग से८क्स उनका लागि बढि आनन्ददायी हुने गर्छ ।
बिहानको एक्सर्साइजलाई गरौं बाईबाई
एक्सर्साइज गर्नमा यदि तपाईंलाई अल्छी लाग्छ भने मर्निंग से८क्सले वर्कआउटलाई रिप्लेस गर्न सकिन्छ । रिपोर्ट्सका अनुसार से८क्स गर्दा एक घन्टामा ३०० क्यालोरि बर्न हुन्छ ।
अध्ययनमा सहभागि मानिसहरुले से८क्सका लागि बेस्ट समय बिहान साढे ७ लाई बताएका छन् । उनीहरुका अनुसार बिहान से८क्स गर्नाले उनको स्ट्रेस कम हुने र दिनभर मूड पनि राम्रो हुने गर्छ ।